Antananarivo- fandriampahalemana Mifarimbona manidy lalana ny mpitandro filaminana
Manara-maso tanteraka ireo lalana miditra, indrindra mivoaka ny Renivohitra ireo mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao.
Tafiditra ao anatin’ny ady amin’ny fanafihana mitam-piadiana sy fakana an-keriny izao ezaka iombonan’ny tafika sy zandary ary polisy izao. Tanjona ny hanidy ny lalana rehetra izay ivoahana ny Renivohitra, indrindra raha misy fanafihana mitam-piadiana mba hisamborana ireo mpanao ratsy mieritreritra ny ho tafaporitsaka amin’ny fanaovan-dratsy. Efa eny am-pelatanan’ireo miaramila misahana ny tetikasan’ny fandriampahalemana ny fitaovana enti-miatrika izany. Mifameno amin’ny ezaka ato anatin’Antananarivo amin’ny fidinana ifotony sy ny fisehoana tanterahin’ireo mpitandro filaminana ny paik’ady. Tsahivina hatrany fa toerana maro eto Antananarivo Renivohitra, mba tsy ilazana fa izy rehetra, no lasa faritra mena, raha Andranomanalina sy Antohomadinika ary Besarety sy Ambanidia ihany izany tany aloha. Zary mampikaikaika ny olom-pirenena hatrany ity tsy fandriam-pahalemana ity. Miandrandra ny mpanara-baovao fa hisy vokany izao velam-pandrika ifandrombonan’ireo tandroka aron’ny vozona amin’ny filaminam-bahoaka izao. Tsy azo lavina fa efa betsaka ireo tratran’ny mason’haraton’ny mpitandro filaminana fa izao tetik’ady “opération épervier” izao koa antenaina hampihena ny tsy fandriam-pahalemana, indrindra ho fisamborana ireo trondro vaventy sy ati-doha mikotrika amin’ny fanafihana mahery vaika sy ny fanaovana kidnapping. Efa fampiasa any amin’ireo Tanandehibe any ivelany tahaka ny any Paris ity tetik’ady ity fa saingy ny “caméra de surveillance” mameno ny lalàna sy ny elakelan-trano no tsy ampy eto Madagasikara.